शीर्ष सात सुझाव गरेको हुनुपर्छ भोगिरहेका पछि मधुमेह-Diabetes वार्ता-Sinocare
शीर्ष सात सुझावहरू मधुमेह पीडितले गर्नुपर्ने हुन्छ
समय: 2020-02-27 हिट्स: 24
१. मधुमेह सम्बन्धी ज्ञान सिक्ने
कम्तिमा उपवास प्लाज्मा ग्लूकोज र पश्चात रगत ग्लुकोजको परिभाषा बुझ्नु पर्छ।
कस्ता कारणका लागि उच्च उपवास प्लाज्मा ग्लूकोज हो?
कुन कारणहरूले उच्च प्रसवोत्तर रगत ग्लूकोज हुन सक्छ?
यदि प्रसवोत्तर रगत ग्लूकोज अधिक छ भने के परिणाम हुनेछ?
यी प्रश्नहरूको उत्तर आगामी लेखहरूमा विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरिनेछ।
२. आहारमा ज्ञानको दक्ष अनुप्रयोग
एक कप आइसक्रिम देखेपछि, मुख लोभले ओढ्छ, र पेट, घाँटी र जिब्रो यसको स्वाद लिन तयार हुन्छ; तर यस बीच, घृणित तर्कसंगत दिमागले बोल्दछ कि यसले रगत ग्लुकोजको स्तर धेरै पटक बढाउँदछ।
जे होस्, यो राम्रो हुन्छ जब त्यहाँ कोमल आवाज छ: तपाईलाई आइसक्रीम खानको लागि मात्र आश्वासन दिइन्छ, किनकि यो ठीक हुन्छ यदि तपाईले एक प्याला पकाइएको चामल लिनुभयो भने, वा यदि तपाई खाना पछि एक घण्टा दौड्नुभयो भने, वा यदि XX IU को इन्सुलिन अधिक पटकको लागि दिइन्छ।
वास्तवमा, मधुमेह रोगी बिरामीहरूले अरु व्यक्तिको सल्लाह कहिले पनि स्वीकार्दैनन् कि कन्जीले रगत ग्लुकोजको मात्रा धेरै बढाउन सक्छ र थोरै लिनुपर्दछ र केरा पनि मीठो छ र खान पनि हुँदैन। यसको विपरित, तिनीहरूले कन्जी उमाल्ने बेला तरकारी र मोटे अन्नहरू थप्न कोसिस गर्दछन् वा केरा खाने बेलामा मुख्य खाद्य पदार्थहरूको सेवन कम गर्दछ। पूर्ण शिक्षा र अन्वेषणको माध्यमबाट, तपाईं यसलाई पूर्ण रूपमा गर्न पनि सक्नुहुनेछ। तपाईले मधुमेह सम्बन्धी ज्ञान सिकिसकेपछि तपाईले त्यस्तो आत्मविश्वास कायम गर्नुपर्दछ।
तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ: "म डाइटको बारेमा केही ज्ञान जान्न सक्छु, तर अझै यसलाई कुशलतासाथ प्रयोग गर्न धेरै गाह्रो छ"। त्यो ठिक छ। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि तलको अनुभवले तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दछ।
A. राम्रो व्यायाम गर्ने बानी विकास गर्दै
ग्लुकोज नियन्त्रण गर्ने प्रायः सबै मास्टरहरू व्यायामको लागि फेन्सी राख्छन्, जस्तै आउटडोर दौड, पार्कमा हिंड्न, डम्बेल होल्डिंग साथ दौडन, स्याडब्याग बाँधेर खुट्टामा बाँध्ने, ब्याडमिन्टन खेल्ने, टेबल टेनिस खेल्ने, हिउँदमा पौडी खेल्ने) र सवारी गर्ने। साइकल कृपया याद गर्नुहोस्: यी तपाईका शौकहरू र बानीहरू हुन्, तर गतिविधिहरू तपाईंले कहिलेकाँही लिनुहुन्छ।
कृपया तपाईंको आलस्य सामना गर्नुहोस्, पहिलो चरणबाट सुरू गर्नुहोस्, र त्यसपछि तपाईं स्वस्थ यात्रा सुरु गर्नुहुनेछ।
A. एक राम्रो डाक्टर संग साथी बनाउने
को पुस्तक डाक्टरहरूसँग साथी बनाउँदै पीपुल्स लिबरेशन आर्मीको सामान्य अस्पतालमा कार्डियोलोजी विभागका प्रमुख चिकित्सक श्री वू हयुनले लेखेका थिए। डाक्टरहरूसँग साथी बनाउने सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको तपाईं डिटोरिingबाट बच्न सक्नुहुन्छ। उदाहरण को लागी, तपाईं एक तथाकथित चमत्कारिक डाक्टर द्वारा विश्वस्त हुनुहुन्छ जसले भन्छ कि विदेशबाट राम्रो औषधी छ, र धेरै मधुमेह बिरामीहरूले यो खाए पछि औषधि लिन छोड्छन् र रगत ग्लुकोजको स्तर पनि स्तरमा पुग्छ। यो मूल रूप मा १ 1999 999 R RMB को मूल्य हो तर वर्तमानमा XNUMX XNUMX R RMB; जब तपाईं यसलाई किन्न तयार हुनुहुन्छ, तपाईं आफ्नो डाक्टर मित्रलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, र त्यसपछि तपाईंको स्वास्थ्य र पैसा बचत हुन सक्छ।
कृपया नसोच्नुहोस् कि डाक्टरहरू साथी बनाउन धेरै गाह्रो छ। मलाई कम्तिमा थाहा छ, दुबै एन्डोक्राइनोलजी विभागका डाक्टर र नर्सहरू मधुमेह बिरामीहरूलाई साथी बनाउन चाहन्छन्।
Quite. एक धेरै राम्रो मधुमेह बिरामी संग साथी बनाउने
तपाईं एन्टि-डायबेटिसको बाटोमा एक्लो हुनुहुन्न। जब तपाईंलाई इन्सुलिनको इन्जेक्सन पछि हुने इन्डोरेसनको उपचार कसरी गर्ने भनेर जान्नुहुन्न, एक मधुमेह बिरामीले तपाईंलाई भन्ने छ कि आलु फ्लेक र तातो तौलियाको साथ दैनिक तातो कम्प्रेस पछि इन्डोरन्सन कम गर्न सकिन्छ।
जब तपाई मेटफर्मिनको प्रशासन पछाडि ठूलो पेट असुविधा महसुस गर्नुहुन्छ, एक मधुमेह बिरामीले तपाईंलाई बताउँदछ कि पेट असुविधा मेटाफर्मिन एन्टिक-लेपित ट्याब्लेटहरू प्रतिस्थापन पछि समाधान गर्न सकिन्छ।
जब यात्रा अवधिमा अचानक खसे पछि लगातार रक्तस्राव हुन्छ, एक मधुमेह बिरामीले अर्को घाउमा इन्सुलिनको दुई थोपा घाउमा घटाए पछि घाव निको हुन सक्छ भनेर बताउँछ।
तपाईंले सामना गरिरहनु भएका विभिन्न समस्याहरू अन्य मधुमेह बिरामीहरूले अनुभव गरेका थिए, उदाहरणका लागि, जब तपाईं घाटामा हुनुहुन्छ; जब तपाईं जीवनमा शful्कास्पद हुनुहुन्छ किनकि तपाईंसँग गम्भीर हाइपोग्लाइसीमिया छ; जब तपाईं जटिलताहरू; र जब तपाइँको ड्रग्स अप्रभावी हुन्छन्। ती समस्याहरू उपचार गर्नका लागि उनीहरूका विधि र अनुभवहरू उनीहरूलाई बताउनेछन्। धेरै जसो अवस्थाहरूमा, केहि तरिकाहरू मधुमेह बिरामीहरूलाई मात्र थाहा हुन्छ।
Drugs. चिकित्सा आदेश अनुसार कडा औषधि प्रशासन
यदि तपाइँ मधुमेह को उन्मूलन गर्न सकिदैन भन्ने तथ्यलाई सामना गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले शान्त हुनुपर्दछ, र सावधानीपूर्वक विचार गर्नुपर्दछ कि कसरी मधुमेहसँग शान्तिमय सहअस्तित्व राख्ने। लागूपदार्थको प्रयोग पक्कै पनि धेरै महत्त्वपूर्ण तरीका हो।
निम्नलिखित सावधानीहरू लागूऔषध प्रयोगको लागि ध्यान दिनुहोस्:
१) सामान्य अस्पतालमा चिकित्सकहरूको सल्लाह स्वीकार्नुहोस्, र चिकित्सा आदेश अनुसार कडा औषधि लिनुहोस् (नोट: अभ्यास चिकित्सकको प्रमाणपत्र बिना व्यक्तिले सिफारिस गरेको औषधि स्वीकार नगर्नुहोस्)।
२) चिन्ता नलिनुहोस् कि कुनै विषाक्तता कुनै पनि औषधिले निम्त्याउन सक्छ। वास्तवमा, मानव शरीरमा लागूपदार्थको सकारात्मक प्रभाव उनीहरूको नकारात्मक प्रभाव भन्दा बढी छ; यसबाहेक, लगभग सबै विपणन औषधि क्लिनिकल मान्यीकरण पारित छ।
)) रगत ग्लूकोज स्तर (उदाहरणको लागि रगत ग्लुकोजको प्रत्येक अनुगमनको सावधानीपूर्वक उपचार गर्नुहोस्) को अनुगमन परिणामहरूको विश्लेषण गरेर ड्रग्सको प्रभाव मुख्यतया अवलोकन गर्नुहोस्।
Blood. रगत ग्लुकोजको प्रत्येक अनुगमनको सावधानीपूर्वक उपचार गर्दै
मधुमेह बिरामीले भनेजस्तै तपाईको रगतको एक थोपा खेर फाल्नु हुँदैन। रगत ग्लूकोजको प्रत्येक अनुगमनको नतिजा तपाईको एन्टि-डायबिटीजको क्रममा संकलन गरिएको जानकारी हुन्। युद्धको क्षेत्रमा जम्मा गरिएको सूचनालाई होशियारीपूर्वक उपचार गर्दा मात्र युद्धमा एउटा पहल प्राप्त गर्न सकिन्छ।
उदाहरण को लागी, धेरै जसो केसहरुमा, निम्न मधुमेह बिरामीहरुमा रगत ग्लुकोजको स्तर सामान्य थियो। सेप्टेम्बर १२ मा, रगत ग्लुकोजको खाना खाजा पछि 12 मिमीोल / एल थियो, र निद्रा अघि 4.3 .9.8 एमएमओएल / एल थियो। मैले त्यस्तो मूल्य सिकेपछि मैले सकेसम्म चाँडो उसलाई सम्पर्क गरें। उनले मलाई भने कि धेरै खाना खानुभएको हुँदा क्यालोरी अपर्याप्त थियो, जब खाजा पछि हाइपोग्लाइसीमिया फेला पर्‍यो, उनी चिन्तित थिए कि हाईपोग्लाइसीमिया बिहान देखा पर्‍यो र यसरी एक कप दही पिए; तर पूर्वकालिक रगत ग्लुकोज अधिक थियो। यद्यपि, निम्न तथ्यहरू रगत ग्लुकोजको यी दुई मापनहरू मार्फत सिकेका छन्:
खानामा, तरकारीहरू रगतमा ग्लुकोजको स्तर मानमा पुग्नको लागि एक्लो लिनुहुँदैन, र उचित मासु पनि लिनु पर्छ; र मानव शरीर एक कप दही द्वारा धेरै प्रभावित छ, दही को सेवन मात्रा आधा द्वारा कम हुन सक्छ यदि अर्को पटक यस्तै अवस्था आयो भने।
सेप्टेम्बर १, मा, पूर्वानुमान रगत ग्लूकोज ११.१ मिमीोल / एल थियो। बेलुकाको खाना पछि, उहाँ एक बास्केटबल खेल खेल्नुभयो, र एक हल्का चक्कर आयो महसुस; त्यसपछि उसले तुरुन्तै केही अpes्गुर र दही लिए, जसले हाइपरग्लाइसीमिया निम्त्यायो।
यदि रगत ग्लुकोजको स्तर अझै राम्रो नभएको अन्य कारकहरूको अन्त्य पछि, यो औषधी वर्तमान उपचारको लागि उपयुक्त छैन भनेर ठान्न सकिन्छ, र डाक्टरलाई समायोजनको लागि देख्न सकिन्छ।
पछि, उसको रगत ग्लुकोजको स्तर राम्रो र राम्रो भयो। वास्तवमा, उनी १ jun वर्षको उमेरमा कनिष्ठ मध्य विद्यालयको विद्यार्थी थिए।
अघिल्लो पृष्ठ: Required Knowledge for Children of Diabetes Patients
अर्को पाना : रगत ग्लुकोजको स्तरको उतार चढावका लागि १० सबैभन्दा सामान्य कारणहरू